China Special yokusebenza steel stainless wire ukwenziwa kunye mveliso | Shougang
Inkampani yethu inembali engaphezu kweminyaka engama-60 kwimveliso yentsimbi engenasici. Ngokukhetha izinto ezisemgangathweni ezikumgangatho ophezulu kunye nokwamkela iinkqubo ezinyibilikayo zesigaba sesithathu se-electroslag eziko + lesigaba esinye sokulungisa isithando somlilo, eziko elingena ngaphakathi, eziko lokuvutha eliphakathi kunye nombane wombane + weziko levod, iimveliso zigqwesile kucoceko kwaye ziyafana, zizinzile ekubunjweni . Uthotho lwe-Bar, ucingo kunye ne-cab cab ziyabonelelwa.
Ingcingo ebandayo ebunjiweyo
Ingqele eqengqelekileyo Strip
Strip eshushu iqengqiwe
Iribhoni eqengqelekayo ebandayo
akukho mkhulu kune
I-Ti5 (C + N)
IiTi 或 0.1-1
Igama Product: 904L
Iimpawu zomzimba: 904L, mninzi: 8.24g / cm3, indawo yokunyibilika: 1300-1390 ℃
Unyango Ubushushu: ukulondolozwa kobushushu phakathi kwe-1100-1150 ℃ iiyure eziyi-1-2, ukupholisa umoya ngokukhawuleza okanye ukupholisa amanzi.
Iimpawu mechanical: eqine amandla: ≥ B ≥ 490mpa, amandla isivuno σ B ≥ 215mpa, zobude: δ≥ 35%, yobulukhuni: 70-90 (HRB)
Nokumelana kunye nesicelo bume esingundoqo: 904L luhlobo intsimbi austenitic stainless nomxholo carbon eliphantsi kunye nesinyithi phezulu ingxubevange, eyenzelwe iimeko umhlwa ngqwabalala. It has nokumelana ngcono kunokuba 316L kunye 317L, kwaye ithathela ingqalelo ixabiso kunye nokusebenza, kwaye ixabiso eliphezulu yokusebenza ratio. Ngenxa yokongezwa kwe-1.5% yobhedu, ine-anti-corrosion ukumelana nokunciphisa ii-asidi ezifana ne-acid ye-sulfuric kunye ne-phosphoric acid. Kwakhona unalo nokumelana ezibalaseleyo nokumelana uxinzelelo, intshontsho umhlwa kunye mqolomba umhlwa okubangelwa chloride ion, kwaye nokumelana elungileyo umhlwa intergranular. Kuluhlu lwee-0-98%, iqondo lobushushu le-904L linokuphakama njenge-40 ℃. Kuluhlu lwe-0-85% ye-phosphoric acid, ukuxhathisa kwayo ukubola kukuhle kakhulu. Kwimveliso ye-phosphoric acid eveliswe yinkqubo emanzi, ukungcola kunefuthe elinamandla ekumelaneni nomhlwa. Kuzo zonke iintlobo ze-asidi ye-phosphoric acid, ukumelana nokubola kwe-904L kungcono kunaleyo yesinyithi esiqhelekileyo. Kwi-nitric acid ene-oxidizing eyomeleleyo, ukuxhathisa ukubola kwe-904L yentsimbi kungaphantsi kunaleyo yentsimbi ephezulu ngaphandle kwe-molybdenum. Kwi-hydrochloric acid, ukusetyenziswa kwe-904L kunqunyelwe kugxininiso olusezantsi lwe-1-2%. Kolu luhlu loxinaniso. Ukuxhathisa ukubola kwe-904L kubhetele kunokwentsimbi eqhelekileyo. Isinyithi se-904L sinokumelana okuphezulu nokubola. Kwisisombululo se-chloride, amandla ayo okumelana nomhlwa. Umkhosi ulunge kakhulu. Umxholo we-nickel ophezulu we-904L unciphisa izinga lokubola emigodini nakwiimingxuma. Isinyithi esiqhelekileyo esingenasici se-austenitic sinokuba novakalelo ekubambeni koxinzelelo kwindawo enobutyebi be-chloride xa iqondo lobushushu liphezulu kune-60 ℃. Ukunyanzeliswa kungancitshiswa ngokunyusa umxholo we-nickel yensimbi engenasici. Ngenxa yesiqulatho sayo se-nickel ephezulu, i-904L inoxinzelelo oluphezulu lokumelana nesisombululo se-chloride, isisombululo sehydroxide egxile kunye ne-hydrogen sulfide yokusingqongileyo.
Igama Product: 304L
Iimpawu zomzimba: Uxinano ngu-7.93 g / cm3
I-30L insimbi yintsimbi eqhelekileyo, esetyenziswa ngokubanzi njenge-chromium nickel insimbi engenasici. It has nokumelana elungileyo, ukumelana ubushushu, amandla obushushu asezantsi kunye neempawu mechanical. Iyanyamezela umhlwa emoyeni. Ukuba yindawo yemizi-mveliso okanye indawo engcoliswe kakhulu, kufuneka icocwe ngexesha ukunqanda ukubola. Kufanelekile ukuba kulungiswe ukutya, kugcinwe kuthuthwe. Kuye machinability elungileyo kunye weldability. Plate sokufudumeza umzimba, imfutho, iimpahla zasekhaya, izinto zokwakha, imichiza, ishishini ukutya, njl 30L steel stainless i grade ukutya evunyiweyo insimbi.
Igama Product: 309Qaphela
Iimpawu zomzimba: eqine amandla: 550MPa, zobude: 25%
Iimpawu kunye nesikhokelo se-welding:
I-309nb inodidi lwe-rutile ene-asidi kwaye iyilelwe ukutshintshela i-electrode yangoku okanye efanelekileyo. I-309nb luhlobo lwe-23CR13 Ni alloy，Ukongezwa kwe-niobium kunciphisa umxholo wekhabhoni kwaye kunika ukuxhathisa okuhle kwimvula ye-carbide, ngaloo ndlela kukonyusa umda wokutya okuziinkozo. Ikwabonelela ngamandla aphezulu phantsi kobushushu obuphezulu bendawo efanelekileyo yokunyibilikisa ubushushu obuphezulu be-ASTM 347 intsimbi edityanisiweyo okanye i-carbon yentsimbi yokufaka iwelding.
I-309nb inokusetyenziselwa ukuwelda ii-steels zentsimbi ezahlukeneyo kunye nee-steels ezingenasici.
Igama lemveliso: SUS434
Iimpawu zomzimbaAmandla emveliso yesivuno itional 0.2 (MPA): ≥ 205 Ukudibanisa δ 5 (%): ≥ 40 Ukuncitshiswa kwendawo ψ (%): ≥ 50
Ubunzima: ≤ 187hb; ≤ 90hrb; ≤ 200hv
Iimpawu ze-SUS434 / 436/439 i-ferritic insimbi engenasici: isinyithi esimele sentsimbi ye-ferrite, ngenqanaba elisezantsi lokunyusa i-thermal, ukuyila okuhle kunye nokumelana ne-oxidation. I-430 isetyenziswa njengeemveliso zokubumba ezinje ngemihombiso yangaphakathi yokuhombisa imoto, kunye ne-434 kunye ne-436 insimbi ezingenazintsimbi zisetyenziswa xa kufuneka ukumelana nokubola. I-436 linqanaba elilungisiweyo lesinyithi elingu-434, elinciphisa ukutyekela "ukushwabana" ekusebenzeni okungqongqo ngokuthe kratya. Isicelo: isitovu esinganyangekiyo ngobushushu, isitovu, izixhobo zombane wendlu, iklasi yesi-2 yetafile, itanki yamanzi, umhombiso, isikrufu kunye nenut
Igama lemveliso: SUS630/632
I-630 / i-632 yimvula ye-martensitic yenze umtya ongenazintsimbi. Unamandla aphezulu, ukuqina okuphezulu, ukusebenza kakuhle kwe-welding kunye nokumelana nokubola. Emva konyango lobushushu, iipropathi zoomatshini zeemveliso zigqibelele ngakumbi, ezinokufikelela kumandla oxineneyo we-1100-1300 MPa (160-190 Ksi). Eli banga alinakusetyenziswa kumaqondo obushushu aphezulu kune-300 ℃ (570f) okanye iqondo lobushushu eliphantsi kakhulu. Unokumelana kakuhle nokubola kumoya kunye neasidi okanye ityuwa. Ukuxhathisa kwayo ukubola kuyafana naleyo ka-304 kunye no-430. 630/632 iye yasetyenziswa kakhulu kwivelufa, ishafti, umzi-mveliso wefayibha yamachiza kunye neendawo zamandla aphezulu ezineemfuno ezithile zokumelana nokubola. Isakhiwo seMetronlographic: uphawu lwesakhiwo luhlobo lokuqina kwemvula.
Yesicelo: esetyenziselwa iimveliso iindawo kunye nokumelana eliphezulu namandla aphezulu, ezifana iibheringi kunye namalungu umphunga turbine.
Igama lemveliso: 05cr17ni4cu4nb
I-7-4ph alloy yinto eqinileyo, eqinileyo kunye ne-martensitic yentsimbi eyenziwe ngobhedu kunye ne-niobium / columbium.
Iimpawu: emva konyango lobushushu, iipropathi zoomatshini zeemveliso zigqibelele ngakumbi, kwaye amandla oxinzelelo anokufikelela phezulu njenge-1100-1300 MPa (160-190 Ksi). Eli banga alinakusetyenziswa kumaqondo obushushu aphezulu kune-300 ℃ (572 Fahrenheit) okanye iqondo lobushushu eliphantsi kakhulu. Unokumelana kakuhle nokubola kumoya kunye neasidi okanye ityuwa. Ukuchasana nokubola kwayo kuyafana ne-304 kunye ne-430.
I-17-4PH yimvula ye-martensitic eyenza lukhuni intsimbi engenasici. Ukusebenza kwe-17-4PH kulula ukulungelelanisa inqanaba lamandla, elinokuthi lihlengahlengiswe ngokutshintsha inkqubo yonyango lobushushu. Eyona ndlela iphambili yokuqinisa yindlela yokuguqula i-martensitic kunye nesigaba sokuqina kwemvula esenziwa lunyango lokuguga. Ipropathi yokunciphisa i-17-4PH ilungile, ukumelana nokudinwa kunye nokumelana nokudilika kwamanzi kunamandla.
· Iqonga le-Offshore, HELIDECK, namanye amaqonga
· Icandelo lokutya
· Ishishini le-pulp nephepha
· Indawo yokubhakabhaka (blade yeinjini)
· Iinxalenye zoomatshini
· Igubu lenkunkuma yenyukliya
Egqithileyo Iimpawu zeLocomotive Braking Resistance
Okulandelayo: Umtya oBanzi weWide wokuCoca iGesi
Yenza ingxubevange Steel umhlwa Resistance
Ubushushu Resistant ingxubevange Steel
Umhlwa High Resistance Steel
Ubushushu High ingxubevange Steel
Ubushushu High yoMvelisi Steel Resistant
Hot asongwe ingxubevange Steel Wire Intonga
Invar Iipropati zentsimbi
Ultra Free-ukusika Stainless Wire for Bal ...
Ihowuliseyili Ubushushu Electrical Wire, Ucingo lokuFudumeza ngombane, Umbane wesiFudumezi, Ukuxhathisa ngombane, Ubushushu Resistant Electrical Wire, Umbane oFudumeza umbane ngombane,